Posted by ZT at 12:45 AM
သူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ သိနေတာ ဘဲ နှောင့်ယှက်စရာမရှိပါဘူး ကိုယ့်ဘာသာနေ တော်သလိုကြည့်နေလိုက်ရတာ ဘဲ ရေပန်းတွေ ဘေးသွားထိုင်လိုက် ဟိုမော့ဒီမော့မော့လိုက်. ရှော့ပင်ကြည့်နေလိုက်. အချိန်တွေ သူ့ဘာသသာသူကုန်သွားတာဘဲ ယောကျာ်ေးလ တွေ စကားကိုယ်လဲနားလည်တာမဟုတ် သူ့မလဲ ဒီအချိန်လေးဘဲ သူတို့ယောကျာ်းလေးစကားပြောရတာ ပြောပါစေလား။
တို့သူငယ်ချငး?တစ်ချို့ ယောကျာ်းအပြင်ကပြန်လာရင် ခေါင်းကိုနမ်းကြည့်တယ် မွေးနေရင်ပြသာနရှာတယ်။ အနိပ်ခန်းသွားရင်စိတ်ဆိုးတယ် တို့ကတော့မဆိုးပေါင် ဒါဇိမ်ခံတာဘဲ ဘာဖြစ်သလဲ။ မဟုတ်ရင်ကိုယ့်ကိုလာနိပ်ခိုင်းနေဦးမယ။်
မိန်းမရရင်... အမ KOMဆီ သင်တန်း လာတက်ခိုင်းမယ်။ :P
ဂျီးတော်ကြီး အ ပြောတခြားအလုပ်တခြား ဖြစ်မနေနဲ့နော်...ဂျီးတော်သာသင်တန်းဖွင့်ရင် လာအပ်မဲ့ အိမ်ဦးနတ်တွေ မနဲဘူး..
ကိုZt ရော ခေါင်းဖု ဖူးလား..
ဒီဇာတ်လမ်းက ဟိုတခါလို trick တွေ မပါသလိုပဲ
Ko ZT always puts on helmat.There;s no potatoes.:)
ကိုဇက်တီ ဖစ်လပိုင်ကပြန်လာတုန်းကဆိုမွေးကြိုင်နေမှာနော် ဟက်ဟက်။
ဖတ်ပြီး မျက်စိထဲမြင်ယောင်ပြီး ခဏခဏရယ်မိတယ်
၃၀%လောက်က စရယ်ရတာ.. ၁ပုဒ်လုံးပဲ
(ဒါနဲ့ သောကြာနေ့ညနေက စီးတီးဟောမှာ ကားလမ်းဖြတ်ကူးတော့ တွေ့လိုက်သလိုပဲ.အရေးကြီးသလို(သုတ်သုတ်)၂ သွားနေတော့နှုတ်မဆက်လိုက်တာ။ ဒါ..ကိုမျိုးတို့နဲ့သွားတွေ့တာပဲဖြစ်ရမယ်..:D )
ကိုမျိုးဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်လား မသိဘူး။
လူပြိုနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် နေရာလွဲတာက လွဲလို့..။ ဟိ
အဲဒီလို မိန်းမမျိုး အပြင်မှာ တကယ်ရှိတယ်နော်.. ဒီထက်နိုင်စားတာ မြင်ဖူးတယ်..
ယောက်ျားနိုင်စားတယ် ဆိုတာက တော်သေးတယ်.. ပညာရှ်ိမဆန်ပဲ လူရှေ့ သူရှေ့မရှောင် နိုင်စားတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးရော၊ လူအများရှေ့ အရှက်ကွဲရတဲ့ထိ ကြောက်ရတဲ့ ယောက်ျားမျိုး တကယ် စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်..။
:D မာမားဆို ဒယ်ဒီအပြင်သွားရင် သာမီးကိုပါ လိုက်သွားခိုင်းတာ..
သူ့ယောက်ျားကို စိတ်ပူတယ်.. သမီးလေးကို စိတ်မပူဘူး..
ဟီး ကြပ်ချက်ကလဲ လွန်ရော..ခင်ဗျာ ဘုတောင်ထတယ်..
တို့များလဲ ဒီလိုပဲ ကြပ်ဘူးတယ်..ဟီး